Buyisela ku-Social Media Investment | Martech Zone
NgoMgqibelo, Januwari 20, 2018 NgeSonto, uJanuwari 21, 2018 Douglas Karr
Imithombo yezokuxhumana ibinethembiso elimangazayo njengendlela yokukhuthaza ubudlelwano phakathi kwekhasimende noma iklayenti nebhizinisi elihlinzeka ngemikhiqizo noma insizakalo. Izinkampani eziningi zigxumele khona manjalo ebhodini kodwa i-ROI ibilukhuni njengoba ibingavamisile ukuphela kwimali engenayo esheshayo noma eqondile.
Ngaphambi kokuthi usethe uhlelo lwakho lomphakathi lube yimpumelelo, kubalulekile ukuqonda ukuthi yimiphi imisebenzi eshayela i-ROI kwezenhlalo. Ngabe ukumaketha kokuqukethwe, ukuqonda komphakathi, noma imizamo yokukhuthaza nokugcina okufana nokuhlinzekwa kwamakhasimende omphakathi? I-Salesforce ihlangene ne-Altimeter ku shicilela isifundo esigxile kulesi sihloko, i-ROI yokuphathwa kwemithombo yezokuxhumana.
Okutholakele ocwaningweni kubonisa ukuthi kunembuyiselo ekutshalweni kwemali emizamweni yezokuxhumana, kepha kusungulwa ngokusebenza kahle nangokuvuthwa. Ukusebenza kahle kuyadingeka ngoba ukusungula isu lezokuxhumana kudinga ukuhlanganiswa nokwenza okuzenzakalelayo ukuhlela, ukuphatha, ukuqapha nokuphendula imicimbi yezokuxhumana.
Ukuvuthwa kuyadingeka ukuze kuqinisekiswe ukuthi kukhona inqubo ephethwe yokwengeza ukuzibandakanya nabezindaba zakho zenhlalo okulandelayo futhi ulinganise ngokunembile umthelela wakho. Eqinisweni, i-ROI yemithombo yezokuxhumana, njengoba ilinganiswa yinkampani inani lokukhuthaza inani, iphindwe kabili ngokuvuthwa.
Landa Umbiko Ogcwele
Bheka infographic yabo, I-ROI Yokuphathwa Kwemidiya Yezenhlalo, Ukuqonda ukuthi yimaphi amaqhinga omphakathi aqhuba i-ROI yomphakathi nokuthi yikuphi ukusebenza okudingayo endaweni yokuxhumana ukuze uphumelele.
Tags: buyela kutshalomalibuyela ezinkundleni zokuxhumanabuyela ekutshalweni kwezokuxhumana nabantu
Ukuqondiswa Kokuthengisa Nokumaketha Kuthinta Kanjani Imiphumela Engcono Ye-B2B ku-LinkedIn
Jan 26, 2012 ku-10: 30 AM
Amasu nezinhloso zokuxhumana nabantu zihlukile kuwo wonke amabhizinisi. Ngenkathi amanye amabhizinisi engathola ukuthi imithombo yezokuxhumana iyindawo enhle yokubamba imincintiswano noma yokuthumela izaphulelo, leyo kungenzeka ukuthi akuyona inkambo elungile yawo wonke amabhizinisi. Kubalulekile ukuhlala uthembekile kubunikazi bomkhiqizo wakho.
Jan 26, 2012 ngo-4: 42 PM
Ngiyavuma ngokuphelele, @nickstamoulis: disqus! Futhi ngicabanga ukuthi kwesinye isikhathi sigxila ku-ROI ukuthethelela yonke imali futhi akudingeki. Kwesinye isikhathi kumane nje kuhle ukukhipha igama lakho lapho ngaphandle kokulindela ukuthi amadola azonetha!
Jan 29, 2012 ku-5: 53 AM
Wewu, le datha ilusizo kakhulu futhi iyaheha. Ngibonga kakhulu!
Imithombo yezokuxhumana ingomunye wemidiya yezokumaketha edume kakhulu, esetshenziswa kakhulu kulezi zinsuku.